Ndingazijonga phi iziphumlisi ezibhaliweyo kwi-Intanethi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ndingazijonga phi iziphumlisi ezibhaliweyo ezikwi-Intanethi?
Ngokoluvo lwam, eyona nkqubo ilula nethembekileyo yokujonga iziphumlisi kwi-Intanethi yi-Microsoft Office Word enenkqubo yezikimu ezicetyiswayo. Ngokoluvo lwam, banele ngokwaneleyo ukuba basebenze naziphi na izicatshulwa. Enye iOfisi evulekileyo.
Ndiyavumelana nempendulo ebhalwe nguPolerol, ngoba Yena ngokwakhe wazama izihlandlo ezininzi ukufumana inkonzo ye-intanethi ukukhangela ukubekwa ngokuchanekileyo kweziphumlisi, kwaye kwiziphumo zokuziswa, kungcono, kuphela ziziza ezinikezela ukubhalisa kuqala kunye nabo, ukudlulisela imali kubo, emva koko baya kujonga ngesandla izicatshulwa ezikhutshelwe kubo.
Andikukhuthazi ukubhalisa kwiindawo ezinjalo, njengoko zingcono kuneZwi, nakweyiphi na imeko, ndiyacinga, abayi kuyilungisa.
Ndiyakuxhasa ukusebenzisa uLizwi.
Namhlanje, olona vavanyo luphezulu lwe-intanethi lweziphumlisi luphunyezwa kupelo.
Nalu uluhlu lwemithetho ayaziyo: https://orfogrammka.ru/puncture/
kunjalo, ewe, kodwa nakwi-opera umntu unokukhangela ngokulula ukupela, kwaye kuqhakamshelwano, ngendlela, nayo, kodwa, kufuneka ulwazi kakuhle ulwimi lwakho, kuba kulihlazo ukuzibona njengoRUSSIAN, kodwa bhala, uxolo, njengothuthu olunempazamo, okanye ngakumbi nangakumbi, ngokungafundanga ngokubanzi, kwaye akuze kube kudala ukufunda, kulihlazo ukungavumi iimpazamo zakho, ubhekisa kwinto yokuba ngoku kwi-Intanethi, kwaye ngokwenene, uninzi lwabantu lubhala ngeempazamo, macala onke kukho kuphela isifinyezo kunye namagama amachaphaza, kwaye eneneni kuye iyimfuneko Kodwa ngoku zama i-PionEra yangoku ukuba ubhale ileta, kodwa hayi nge-imeyile, kodwa ngendlela yakudala. Oko kuya kuba kukuhleka))
Zininzi iinkonzo zokujonga ukupela kwi-Intanethi (umzekelo, ukusuka kuYandex okanye kwi-morphology.ru, nangona kunjalo, akukho nasinye sezixhobo endizijongileyo kwi-Intanethi ezikhangele iimpawu zokubhala .. Kuyaqondakala oku, kuba apho ukubeka ikoma kuxhomekeke kwintsingiselo, thatha ubuncinci Umzekelo wesicatshulwa u-quot; Ukubulala akunakuthethelelwa,; apho ikoma inokufakwa naphi na, ngokokubona kwethu.
Olona khetho lufanelekileyo sisicelo seOfisi- iMicrosoft Word, engahlali iipesenti ezili-100, kodwa ijongisisa iziphumlisi. Ukwenza le nto kuyabonakala emfanekisweni. Kuyimfuneko ukubhala isicatshulwa kwaye ucinezele F7:
Ungabona apho unokukhuphela khona iZwi lamahala kule Umcimbi.
Ngaba i-Ofisi yeMicrosoft Office ilungile? Ke ndingathanda ukucacisela i-WHO? Ukuba uzibhalela izicatshulwa, unokuqiniseka ukuba zanele. Kwaye ukuba usebenza nomthengi kutshintshiselwano ngomxholo odumileyo, uya kuthi ujonge le nkqubo ngaphandle kweenyembezi))
Ayikho inkonzo ekwi-intanethi enokubonelela ngeenkonzo zokuqinisekiswa kweziphumlisi ezisisigxina. Thatha igama, lihlolwe, njengoko besitsho, ngokwakho. Zininzi iziza ezininzi apho inkonzo enjalo inikezelwa njengenkonzo ehlawulelwayo, kodwa umgangatho wokuqinisekiswa uhlala ungalindelekanga.
Nje ukuba ndizame ukusebenzisa inkonzo ehlawulelwayo, kwafuneka ndibhale inqaku lokuqinisekisa iziqinisekiso kwenye yokutshintshiselana ngomxholo ... Ndabhala ndathunyelwa ... Emva kokujonga, ndiyithumele ukuba iphinde ijongiwe ... kunye nenqaku elithi; ngqo kwiimpazamo zeziphumlisi. Nokuba ungene nini Igama leMicrosoft Kufunyenwe iimpazamo ezininzi.
Ukuqinisekiswa okunjalo akuqinisekisi nto ngaphandle kweendleko zemali. Jonga kwakhona Igama leMicrosoft akasoloko elungisa iimpazamo ezibonakalayo. Kuyimfuneko ukuba ubhale izivakalisi ezimbalwa ezintsonkothileyo ezinokwenzeka kwisicatshulwa, ithuba elincinci lesiphoso. Iimpawu zokubhala ziphantse zaqwalaselwa njengempazamo.
Ndifumene inkqubo ephucukileyo evelisa iziphumo ezingcono kuneMicrosoft igama Yinkqubo UMhleli we-ORFO. Kuhlawulwa ngokwenene, kodwa kukho izitshixo zonxibelelwano. Yizame, mhlawumbi le yile nto uyifunayo.
Kwaye ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ukuba ucaphule; kwinkumbulo imigaqo-nkqubo yeziphumlisi kulwimi olibhalayo. Oku ndikwenza amaxesha ngamaxesha ukuziphucula ngokwakho. :)))
Ngokukhangelwa kweziphumlisi kwi-Intanethi kusekho ngokuqinileyo, ngoko ke ingcebiso yam iya kuba lula: phinda imithetho yolwimi lwaseRussia. Abayinkimbinkimbi kangako, kwaye, ndiyacinga, emva kokuhlala ngorhatya oluninzi, kuyakuthi kususwe iimpesenti ezingamashumi asibhozo zeempazamo ekubekweni kweekoma. Imigaqo ayinasiphelo, banike nje ixesha.
Ukufakwa kweziphumlisi kwi-intanethi kulungile ukuba ujonge kuMicrosoft Office Word okanye kwiOfisi evulekileyo. Kuzo zombini iinkqubo izivakalisi apho kukho iimpazamo zeziphumlisi zikrwelelwe umgca we-wavy oluhlaza. Ungacofa ekunene kwesi sivakalisi kwaye uya kunikwa ukhetho lokulungisa impazamo. Kodwa kuyenzeka ukuba banganiki zikhetho, kwaye ke kuya kufuneka uzifumanele ngokwakho isiphumlisi.
Inkonzo ezenzekelayo kwi-Intanethi ayikenziwa, kodwa ungasebenzisa eyokuzenzekelayo ukuba uneblogi kunye nabahlobo abaninzi abahlala bekwi-intanethi, unokucela abahlobo bakho ukuba bajonge indawo yokubhala kwisicatshulwa sakho okanye unoku-odola isheke kwiwebhusayithi ye-advego.ru apho amakhulu amawaka abakhupheli besebenza kwi-Intanethi nakwimali encinci. uyakuhlala ukuvuyela ukunceda.
kukho inkonzo enjalo e-Runet - orfogrammka.ru
Jonga kungekuphela nje upelo, igrama, isitayile, kodwa kunye neziphumlisi
ayifumani iimpazamo kuphela, kodwa ikwachaza nesizathu sokubhekisa kumgaqo ohambelana nawo
Kukho iitoni zokupela ekhompyutheni, kodwa akukho ziphumlisi, ngelishwa. Kuyabonakala, ukuba ulwimi lwesiRashiya luntsonkothile kakhulu ukuze lwenze ukuba lukhangelwe ngokuzenzekelayo. Intsingiselo yesivakalisi ibalulekile, ongenakuqonda umatshini nangayiphi na indlela. Kukho iinkonzo apho, ngomrhumo, abantu abaphilayo baya kutshekisha isicatshulwa ukufumana iziphumlisi. Ukuba ufuna ngenene, ungaphendukela kubo. Kodwa, njengomthetho, oku kudla ngokufuneka kwabo bangabakhupheli ngokwabo okanye bangabhala kwakhona kwaye abaphili, kwaye ke bachitha umvuzo omncinci wokuqinisekisa. Banolwazi lwabo ngemithetho yolwimi lwaseRashiya.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,530.